एमाले अग्रस्थानमा आएको छ, तर यो काफी छैन ः केपी ओली | Mechikali Daily
एमाले अग्रस्थानमा आएको छ, तर यो काफी छैन ः केपी ओली
Posted By: Mechi Kalion: १० जेष्ठ २०७४, बुधबार ०५:२१
करिब १९ बर्ष पछि भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्बाचनमा नेकपा एमालेले अग्रस्थान हाँसिल गरेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पछि पार्दै एमाले अग्रस्थानमा हुनुको कारण साथै समसायिक राजनीतिक गतिविधिका विषयमा केन्द्रित रही एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पत्रकार विजय पौडेलले गरेको कुराकानीको अंश ः
तपाईंले बनेपाको विजयी सभामा ‘कांग्रेसको यतिधेरै मत कसरी आयो’ अभिव्यक्तिको अर्थ के हो ?
नेकपा एमालेले जस्तो नीति लिएको छ, जस्तो कार्यक्रम लिएको छ, जस्तो दृष्टिकोण लिएको र जस्तो ब्यवाहार गरेको छ, जुन निष्ठाका साथ काम गरेको छ, देशभक्तिको सवाल होस्, लोकतन्त्रको सवाल होस्, सामाजिक सद्भावको सवाल होस्, सामाजिक न्याय र समानताको सवास होस्, राष्ट्रिय एकताको सवाल होस् वा समृद्धिको सवाल होस् सबैमा इमान्दारिता देखाएको छ । त्यतिमात्र नभई छिमेकीहरुकोसँगको सम्बन्धको सवाल होस् अथवा विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एमालेले परिपक्वता देखाएको छ । अझ देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति निष्ठा देखाएको छ । त्यसैले यो भन्न जरुरी ठाँने । त्यस हिसाबमा नेकपा एमालेको अग्रस्थान त आएको छ, तर यो काफी छैन् । यतिबेलासम्म एमालेले १ सय ४५ स्थानमा जित्नुपर्दथ्यो । त्यो हुन सकिरहेको छैन् ।
एमालेले सोचेअनुसार मत किन आएन ?
म यसमा कसैलाई दोष दिने प्रयास गर्दिनँ । यद्यपि , सत्ताको दुरुपयोग र भ्रमपूर्ण प्रचार हामीले देखेका छौँ । प्रचार संयन्त्रहरुको दुरुपयोग भएको छ । बुथ कब्जा हुन्छ, त्यहाँ प्रहरीको दुरुपयोग भएको छ । यी कुराहरुले असर पारेको छ ।
त्यसको उदाहरण दिनुहोस न ?
पहिलो त दोलखा घटना हेरौँ न, त्यसपछि अरु घटनाहरु पनि धेरै छन् । एमालेका तर्फबाट बनाइएको ‘हाजिरी जवाफ’ प्रचारशैलीलाई बङ्याएर अनैतिक प्रचार सत्तापक्षबाट भएको छ, त्यस्ता धेरै दुसप्रयासहरु भएका छन् । यसका लागि हामीले संसदीय छानविन समिति बनाऔँ भनेका छौँ ।
त्यसो भए अहिले कांग्रेसले पाएको मत उसको मत होइन ?
होइन, मैले त्यसो भनेको होइन । केही ठाउँहरुमा नाङगो धाँधली भएको छ । धाँधली धेरथोर कांग्रेसले गरेकै छ । तर, म यतातिर जाँदिनँ, हामीले जनतालाई अझै भ्रममुक्त पार्न सकेका रहेनछौँ भन्ने प्रमुख कुरा छ । यहाँ कस्तो छ भने केही पार्टीका नेताहरु ठिक छैन भनेर भन्न सकिरहेका छैनौँ ।
तपाईंहरुले राप्रपासँग तालमेल गरेर मत घट्यो पनि भनिएको छ नी ?
हामीले विभिन्न दलहरुसँग विभिन्न स्थानमा सहकार्य गरिरहेका छौँ । हामी अरुसँग मिल्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ ।
फरक धार भएका दलहरुबीच तालमेल हुनुको आधार के हो त ?
फरक दलको विचार र नीतिलाई मानेर होइन कि तर पहाड र तराई छुट्टाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । संवैधानिक प्रक्रिया र संसदीय सर्वाेच्चतालाई कमजोर पार्ने कुरा, स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने कुरामा हाम्रो मत मिल्दैन् । लोकतान्त्रिक शक्ति, राष्ट्रियता र विकासको दृष्टिकोणमा एक हुने शक्तिलाई तालमेल गरेका हौँ । सरकारमा नभएको पार्टीसँग तालमेल गरेका हौँ ।
दोस्रो चरणको निर्बाचनको तयारी भइरहेको छ तर यो निर्बाचन सुनिश्चित छ ?
मलाई लाग्छ यो सुनिश्चित छ । यद्यपि,वैशाख ३१ मा नै गर्नुपर्दथ्यो । खेतीपातीको समय र गर्मीको समयको जेठ ३१ मा चुनाव हुनु गलत थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तपाईंहरु मधेसमा कसरी भोट माग्नुहुन्छ ? मधेसीहरुले त चोट लागेको महसुश भएको छ त । के मैले मधेसको विकासका लागि असाधारण बजेट छुट्टाएँ ? के भएर चोट लाग्यो ? धेरै योजनाहरु मधेसका लागि छुट्टाइएको छ त । मधेसी जनताको भावनामा चोट पु¥याउने कुनै कुरा हामीले गरेका छैनौँ ।
नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप भयो भनिन्छ, यहाँले के बुझ्नुभएको छ, यसको अन्त्य गर्न सकिदैन ?
यसका बारेमा मैले प्रधानमन्त्री भएर पनि अनुभव गरेँ । यसबारेमा दुवैतर्फको कमजोरी देखिन्छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध मर्यादित ढंगले चल्नुपर्छ, तर यस मानेमा हाम्रो कमजोरी पनि छ । नेपालका पक्षबाट आफ्नो प्रष्ट कुरा पनि भन्न नसक्ने अनि भारतले पनि भन्न नसकेर समस्या भइरहेको छ । दुईवटै सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक हुन् । पारस्पररिक लाभ र सम्बन्धका सवालमा कुराहरु हुन सकिरहेका छ्रैनन् ।
यतिबेला कुनै राजनीतिक सहमति गरेर चुनावमा जानुपर्ने भन्ने अवस्था आएको हो ?
संविधान शंसोधन, सीमांकन हेरफेरका सवालमा चुनावपछि निर्णय गर्न जरुरी छ । संविधान विपरीत सरकार चल्छ भने उहाँहरुलाई हामी संविधान अनुसार चलाउन तयार छौँ । चुनावका बीचमा शंसोधन कसरी सम्भव छ ? बलजफ्ती सम्झौता गर्ने र हामीले आंैठाछाप गरिदिनुपर्ने ? यो सम्भव छ्रैन् । हामी छलफल गरेरै अघि बढौँ भनिरहेका छौँ । (इमेज टिभीका पत्रकार विजय पौडेलले लिएको अन्तर्वार्ता)
होटल व्यवस्थापन तालिम लिनेहरु बेरोजगार हुनुपर्दैनः मैनाली
२० मंसिर २०७७, शनिबार १७:४३
नेतृत्व अब नयाँ पुस्तामा सुम्पनुपर्छः प्रधानमन्त्रीओली
२३ कार्तिक २०७७, आईतवार ११:३३
२१ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०३:४५
के गर्मी बढे भाइरस हराउँछ ?
१५ चैत्र २०७६, शनिबार २१:२२